Home » Creative Writing » ကျနော် နဲ့ မောင်ဝမ်း
အခုလူတိုင်းဖုန်းကိုင်ပြီး အင်တာနက်ပါ သုးံနိုင်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ တခုတော့ ရှိတယ်အကို fb မှာ များသောအားဖြင့်တွေ့နေရတာ တခါတရံ ဘာတွေရေးကြပြောကြမှန်းကိုမသိဘူး ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံစားလာခဲ့ကြတာခြင်း အတူတူ ခုချိန်မှာ အပြန်အလှန်ဆဲဆိုရန်ဖြစ်နေ ကြတယ်ဗျာ။ ကျနော် ငယ်ငယ်က ကြားဖူးတဲ့ သာသနာမောင်းရှေ့ကဆော် ဒေါင်းတွေကအော်ဆို တာ ၈၈ လို ရွှေဝါရောင် လို ဆော်တာမျိုးလို့ မြင် ခဲ့တာ။ အခု မောင်းတွေက ဒေါင်းတွေ ကိုဆော်နေတယ်ဗျာ။
အေးကွ အဲဒါတွေက ဖုန်းတွေ အင်တာနက်တွေ ခုလိုဝုန်းကနဲ ဒိုင်းကနဲ ပွင့်သွားတာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ လူမှုကွန်ယက်ပေါ့ကွာ။ အဲ အဲဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ တသက်လုးံ အမှောင်ထဲမှာ ပိတ်လှောင်ခံထားရတဲ့ငှက်တွေ ရုတ် တရက် ဝုန်းကနဲ ပွင့်သွားတဲ့ နံရံက အပေါက် ကို မြင်တော့အလုအယက် အပြင်ကိုထွက်ပြီး ကိုယ်မြင်ရာ ကိုယ်သန်ရာ ပြောဆိုနေကြသလိုမျိုးတွေရယ် အဲဒီအပေါ်မှာ အခွင့်ကောင်းယူတတ်သူတချို့ ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးကြည့် အသုးံချသွားတာတွေကြောင့်ပေါ့ကွာ။ စောစောက ပြောသလို အင်တာနက်ဖရီး သုးံ ခွင့်ရပြီး တောကော မြို့ပါမကျန် ဖုန်းတွေ အင်တာနက်တွေ သုးံ ခွင့်ရကြည့် နောင် ၃ နှစ်လောက်ကြာရင် အကုန်လုးံ ရင့်ကုန်ပြီး ဒါမျိုး အလှည့်ခံရ မှာမဟုတ်ဘူး။
ဒါနဲ့ အကို့ ကို ကျွန်တော် မေးဖို့ မေ့သွားတယ် အကိုကော အဆင်ပြေလား
မပြေပါဘူးကွာ အကိုလည်း မင်းလိုပါပဲ fb စကားနဲ့ ပြောရရင် ဒို့တွေက ဘွတူတွေပါ။ ဒီလိုနဲ့ အသက်ကြီး နောက်တော့လည်းသေသွားမှာပါကွာ။
ခေါင်းစဉ်ရေးဖို့ မေ့သွားတယ် သူကြီး
ခုရက်ထဲ အင်တာနက်လိုင်းဆိုးလွန်းလို့ ကိုယ့်ပိုစ့်တောင် ရေးရင်းတန်းလန်းနဲ့ ရပ်ထားရတာ၊
ရဲရင့်လှိုင်ရဲ့ လက်ရာလေး ပြန်ဖတ်ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
မနက်အစောကြီးရွာထဲ မောင်ဝမ်းနဲ့ အတူလျှောက်ပြီး အိပ်ရေးမဝသလိုရှိတာနဲ့ ပြန်အိပ်လိုက်တာ ခုမှနိုးတော့တယ် ဟီး…
ကြီးမေ ဘယ်သူ. တင်တင်
ကျနော် လည်းအတူတူပါပဲ အန်တီအေးရေ…
ရွာမှာ ဖိန့်ဖိန့်တုံအောင် ကြောက်ရတဲ့ ဓနရှင် ခိုနီဒုံဂျီးဆိုဒါ ရှိတယ်….။ နင်မသိလေလား… ။ တခါ ငါက ဗုမသိ ဗမတိနဲ့ အယင်းယှဉ် အယင်ယှဉ်းရမည် ပေါမိဒါ တသပ်လုန်း မုန်းသွားဘာလှေရော.. ဖြစ်ပုံပြောပါဒယ်…။
နီ က ရော အတော်လေး သည်းခံဖို့ ကောင်း တာကိုး ဟဲ့ ကြောင် အပြုတ် ရဲ့။
.မောင်ဝမ်း ဆိုလို့ကျုပ်သိဖူးတဲ့ ရေနံချောင်းကမောင်ဝမ်းမှတ်လို့ :))
.လစာလေး ၁၅၀၀၀၀ ရတဲ့လူက ဖုန်းဘေ(အင်တာနက်ဖိုး) တစ်လ ၁၅၀၀၀ – ၂၀၀၀၀ .ဖိုးသုံးတယ်ဆိုတာတော့ မနိတ်လှဘူးထင်မိတယ် ကိုရဲရင့်လှိုင်ရေ
ရေနံချောင်းမှာ မောင်ဝမ်းဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့( ၃)ယောက် ရှိတယ်။ ပထမ တယောက် က ဦးမိုက်ပြောတဲ့ မောင်ဝမ်း ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျန်(၂)ယောက်က အသက် ၂၅ ဝန်းကျင်တွေပါ။
.ကျုပ်သိခဲ့တဲ့မောင်ဝမ်းက ၈၈ တုန်းကနိုင်ငံရေးသမား…ခုတော့ အင်္ဂလိပ်စာပို့ချနေလေရဲ့
ကျွန်တော် ကလည်း ရေနံချောင်းသား ဖြစ်နေလို့လားမသိဘူး မောင်ဝမ်း တို့ တူးမောင် တို့ဆိုတဲ့ နာမည်လေးတွေ သဘောတွေ့ မိတယ်ဗျ ။ စာရေးဖို့ နာမည် ရွေးတော့လည်း ဒီနာမည်လေးကိုသိပ်မစဉ်းစားမိပဲလျောလျောရှုရှု ချရေးဖြစ်သွားတယ်။
လေထဲရောက်သွားတဲ့ပိုက်ဆံလေးတွေ တာဝါတိုင် တတိုင်နဲ့တတိုင် ကူးသွားတာပေါ့နော် ဦးပေါက်။
. နောက်မျိုးဆက် တွေ အတွက် တော့ အရီးတို့ ရနိုင်သမျှ ကြိုးစားချင်ပါသေးတယ်။
ကြုံသမျှ ဆုံရဦးမှာပေါ့ အရီးရေ…
ဒီလိုပြောလိုက်ပေါ့ ဘာညာ ကွိကွ …ကွိကွ
အမေစု လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့သူ သမဒ ဖြစ်မယ် ထင်သလားးးး